OEM & ODM zuru oke ube matrages na ndepụta akwụkwọ nri | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa kachasị mma coil mmiri na-emepụta ihe. Nchekwa foam Ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-agba mbọ ịzụlite ụdị ọhụụ. Cliil na-esi nri A na-achịkwa àgwà mma nke Rayson na-achịkwa. Ọ na-ekpuchi ihe nke aluminom, ibu nke track, ọnụ ahịa SoundProof ọnụ, ọkwa nchekwa nchekwa na ihe ndị ọzọ.
Rayson etolitela ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọkachamara na onye na-eweta ihe a pụrụ ịdabere na ngwaahịa dị elu. Na usoro mmepụta ahụ dum, anyị na-eme ka usoro njikwa usoro nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị guzobere, anyị na-agbaso oge niile, njikwa sayensị, na ndozi na-aga n'ihu, ma na-enye ọrụ dị mma iji zute na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa ngwaahịa ọhụrụ anyị nke akwa na igbe ga - eweta ọtụtụ uru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnata nyocha gị. Ulo mmiri zuru oke na igbe mmiri ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ọhụrụ anyị nke ọma na igbe oge opupu ihe ubi, na-anabata ngwaahịa anyị nwere ike ịchọrọ ike. Akụ ya siri dị ka mmiri na-eguzosi ike na mmiri, na-eyi, na akpụ akpụ.